जो व्यक्ति बिहान चाँडै उठ्छन र राती चाँडै सुत्छन्, उनीहरु स्वस्थ र बुद्धिमान हुन्छन् - ज्ञानविज्ञान
जो व्यक्ति बिहान चाँडै उठ्छन र राती चाँडै सुत्छन्, उनीहरु स्वस्थ र बुद्धिमान हुन्छन्
भनिन्छ नि बिहानै उठ्दा धनि हुन सकिन्छ, यसमा कोहि बिस्वास गर्छ त् कोहि गर्दैंनन । जो व्यक्ति बिहान चाँडै उठ्छन र राती चाँडै सुत्छन्, उनीहरु स्वस्थ र बुद्धिमान हुन्छन् भने उनीहरुसँग पैसाको कमी पनि हुँदैन, यसै भनाइ अंग्रेजीमा पनि छ, ‘अर्ली टू बेड एण्ड अर्ली टू राइज, मेक्स अ म्यान हेल्दी, वेल्दी एण्ड वाइज’
भनाइ त ठिक छ, तर के साँच्चै नै यस्तो हुन्छ ?
बेलायतमा बस्ने टिक पावेललाई बिहान चाँडै उठ्न फिटिक्कै मन पर्दैन । तर उनी बिहान ६ बज्नुअघि नै उठ्छु । उनी जिममा गएर वर्कआउट गर्छन् । काममा जाने तयारी गर्छन् र बिहान ९ बजे काम सुरु हुनुअघि नै अफिस पुग्छन् । काम सुरु गर्नुअघि उनी आफ्नो अफिस नजिकै बनेको पार्कमा केही बेर टहल्छन् पनि ।
बिहिबारको दिन त टिम अझ चाँडै नै उठ्नुपर्छ । त्यसदिन उनी बिहान ५ बजेर बीस मिनेटमा नै बेड छोड्छन् किनभने अफिस जानुअघि उनी जर्मनी भाषा सिक्न जान्छन् । टिम दैनिक आधा घण्टा कडा व्यायाम गर्छन् । आरामसँग बसेर नास्ता खान्छन् । थोरैबेर पार्कमा टहल्छन् । जर्मनी पनि सिक्छन् । यी सबै काम उनी अफिस जानुअघि नै गर्छन् ।
उनी सधैं बिहान चाँडै नै उठ्छन् तर उनलाई चाँडै उठ्ने बानी निकै समयपछि लाग्यो । उनका अनुसार सुरुमा उनी बिहान सबेरै उठेपछि निकै अल्छी मानेर सुतिराख्थे । थुप्रै पटक त उनी पुनः सुत्थे । लगातार बिहान उठ्दा उठ्दै अब उनलाई यसको बानी लागेको छ । उनका अनुसार पहिलो दिनमा नै तपाईं सगरमाथा चढ्ने बारे सोच्न सक्नुहुन्न ।
धेरैजसो सफल व्यक्तिहरु बिहान चाँडै उठेर आफ्ना महत्वपूर्ण काम, बिना कुनै रोकटोक समाप्त गर्न चाहन्छन् । चर्चित पत्रिका भोगकी सम्पादक एना विन्टोरले उनको दिन बिहान पौने ६ बजे सुरु हुने बताइन् । उनी काम सुरु गर्नु एक घण्टा अघि टेनिस पनि खेल्छिन् ।
जानकारका अनुसार बिहान उठेदेखि अफिस पुग्ने बिचको समय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यतिबेला थुप्रै यस्ता काम गर्न सकिन्छ जो नीजि रुपमा कुनै व्यक्तिका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । त्यो तपाईंको अफिससँग जोडिएका काम हुँदैनन् । जस्तो कि टिम पावेल जर्मनी सिक्छन् र आफ्नो राम्रो स्वास्थ्यका लागि जिममा काम गर्दछन् ।
कोही व्यक्तिहरु यो क्रममा तपाईंको अधुरो किताब पूरा गर्ने कोसिस गर्दछन् । यस्तै, केही मानिसहरु यो खाली समयमा परिवारसँग बिताउन मन पराउँछन् ।
तर प्रश्न यो उठ्छ कि बिहान उठ्ने बानी कसरी बसाल्ने ?
अष्ट्रेलियाको पर्थ यूनिभर्सिटीका प्राध्यापक मार्टिन ह्यागरका अनुसार तपाईंको रुटिन निकै हदसम्म तपाईंको बानीमा निर्भर हुन्छ । ह्यागर यो कुरामा अनुसन्धान गरिरहेका मानिसहरु आफ्नो बानीमा कसरी नियन्त्रण पाउँछन् । उनको अनुसन्धानबाट पत्ता लागे अनुसार यदि तपाईं आफ्नो रुटिन सुधार्नु हुन्छ भने तपाईंका विभिन्न बानी पनि सुध्रिन्छ । उनका अनुसार रुटिन सुधारेर, राती अबेरसम्म जाग्ने व्यक्ति पनि बिहान चाँडै नै उठेर थुप्रै काम समाप्त गर्न सक्छन् ।
मार्टिन ह्यागर धेरैजसो बिहान ६ बजे उठ्छिन् । बिहान वर्कआउट गर्छन् । स्वस्थ नास्ता खान्छन् । त्यसपछि उनी बिहान आठ बजे काममा पुग्छन् ।
उनका अनुसार यदि तपाईं बेलुका व्यायाम गर्छु भन्दै कुरा टार्नु हुन्छ भने बेलुकासम्म तपाईं यति थाक्नुहुन्छ कि व्यायामका लागि जानै सक्नुहुन्न । त्यसकारण उनी सुत्नुभन्दा अघि बिहानको तयारी गर्छन् । अलार्म लगाउँछन्, अनिमात्र सुत्छन् ।
तर बिहान उठ्न विशेष नियम हुनुपर्छ भन्ने होइन । दिन कहिले सुरु गर्ने भन्ने कुरा तपाईंमा निर्भर हुन्छ । हरेक व्यक्तिको भिन्न रुटीन, भिन्न लक्ष्य र भिन्न जीवन–शैली हुन्छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईं आफ्नो रुटिनबाट बिहानको समय कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंलाई बिहान उठ्न समस्या भइरहेको छ भने दैनिक केही बेर अघिको अलार्म लगउनुहोस् । बिस्तारै बिस्तारै चाँडै उठ्ने बानी पर्छ ।
‘ह्वाट द मोस्ट सक्सेसफूल पिपल डु बिफोर ब्रेकफास्ट’ नामको किताब लेख्ने लारा वान्डरकामका अनुसार बिहानको समय तपाईंको आफ्नो समय हो । कसैले पनि यो समय तपाईंबाट खोस्न सक्दैन । संसारभरीका अन्य जिम्मेवारी तपाईं दिनको अन्य समयमा गर्न सक्नुहुन्छ, तर बिहानको समय आफ्नो लागि राख्नुहोस् ।
वान्डरकामले सफल र निकै व्यस्त मानिसहरुको रुटीनमा नजर राखेकी छिन् । यस्ता व्यक्तिले बिहानको समय आफ्नो लागि राख्ने गरेको उनले पत्ता लगाइन् । कसैलाई स्वास्थ्यसँग लगाव छ भने कसैलाई नयाँ कुरा सिक्ने जाँगर, यस्तै कोही भने आफ्नो परिवारसँग बिताउन चाहन्छन् ।
वान्डरकामका अनुसार यदि तपाईं केही कुरा गर्न चाहनुहुन्छ तर समय निकाल्न सकिरहनुभएको छैन भने हिान चाँडै नै उठ्ने कोसिस गर्नुहोस् । बिहान चाँडै उठ्नका लागि बेलुका चाँडै सुत्ने कोसिस गर्नुहोस् । टेलिभिजन हेर्न, नेट सर्फ गरेर आफ्नो बेलुकाको समय बर्बाद नगर्नुहोस् ।
अमेरिकाको मिशिगनमा अल्बियन कलेजकी असोसिएट प्रोफेसर मारिके विथका अनुसार जसरी बिहान चाँडै उठ्ने व्यक्तिले आफ्नो समयको फाइदा उठाउँछन् त्यसै गरी अबेर रातीसम्म जाग्नेहरु पनि बिहानको रुटीनको फाइदा उठाउन सक्छन् । अबेर रातीसम्म जाग्ने व्यक्तिहरु बिहानको समयमा धेरै रचनात्मक हुने भएकोले बिहानको समयलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सकिने उनले आफ्नो अनुसन्धानमा पत्ता लगाएकी छिन् ।
Don't Miss it चेक बुट्टा भएको अम्लेट बनाएर आफ्नो नानीलाई छक्क पार्ने हैन त? हेर्नुहोस भिडियो सहित।
Up Next यी हुन् मानिसमा हुनुपर्ने ३२ लक्षण
कस्ता मानिसलाई लामखुट्टेले बढी टोक्छ ?
# लामखुट्टेमा हुन्छन् सेन्सर डा. महुलियाको भनाई अनुसार लामखुट्टेमा मानिस र जनावर भएको ठाउँ थाहा पाउनका लागि एक विशेष प्रकारको…
के हो डेंगु ? यस बाट बच्ने उपाय र लक्षण
डेंगु एडिस एजेप्टाई र एडिस एल्वौपेक्टस नामक लामखुट्टेले टोकेर हुने तीब्र भाइरल संक्रमण हो । यो भाइरस डेंगु १, डेंगु…
बिहान खाली पेटमा पिउनुहोस्, एक गिलास मनतातो पानी ! मिल्नेछन् यी फाइदाहरु
पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ…
गोलभेंडा गोलभेंडा सलादका रूपमा खानुभयो भने दिमागलाई धेरै फाइदा गर्छ । यसमा भएको लाइकोपीन एन्टीअक्सिडेन्टले शरीरलाई –याडिकल कणहरूबाट रक्षा गर्छ…